`နှလုံးသားလက်ဆောင်´ အပိုင်း(၃) -မိုးရိပ် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » `နှလုံးသားလက်ဆောင်´ အပိုင်း(၃) -မိုးရိပ်
`နှလုံးသားလက်ဆောင်´ အပိုင်း(၃) -မိုးရိပ်
Posted by aung nainglin on May 24, 2012 in Copy/Paste |4comments
`ဟ……..ငါမှမင်းနာမည်မသိတာ……….အမိလို့ ခေါ်တာအထူးအဆန်းဖြစ်နေလို့ လား……
နေပါအုံး..ငါမသိတာလေးရှိလို့ မေးပါရစေ…..မင်းကို ငါကဇာတ်လမ်းထွင်မယ်လို့ …ထင်နေတာလား……´
` မဟုတ်လို့ လား ………အသိသာကြီးပဲဟာ…..´
မင်းက ငါ့ဘ၀အတွက် ဘယ်လောက်တောင်တန်ဖိုးကြီးမားနေလို့ လဲ…..မ၇ှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ အ၇ာဝတ္တုလဲမဟုတ်ဘူး…
အဲ့ဒါကြောင့်ဇာတ်လမ်းထွင်မယ်လို့ ထင်နေရင် မင်းစိတ်ကူးတွေကို ဖြတ်ပြစ်လိုက်တော့ မိန်းကလေး…..´
ကျွန်တော်စိတ်ထဲရှိတာကို စိတ်တိုင်းကျပြောပြီးသွားပြီဆိုတော့ ကောင်မလေးရဲ့ မျက်နှာကို တစ်ချက်ကြည့် မိတယ်။ မထင်ထာခဲ့ တဲ့ ပုံစံကို အမှတ်တမှတ် တွေ့ လိုက်ရတော့ ကျွန်တော်အရမ်းပဲ လွန်သွားပြီလို့စိတ်ထဲကနေ အလိုလိုသိလိုက်ပြီလေ ။ ကျွန်တော်ဦးခေါင်းကို ဆင်နင်းလိုက်သလိုခံစားလိုက်ရသည်။ လှပတဲ့မျက်နှာလေးမှာ မျက်ရည်စလေးတွေစွန်းထင်းတော့မယ် ဆိုတာ သိနေခဲ့ တော့ အသိစိတ်က ကျွန်တော်ပြောတာတော်တော်လွန်သွားပြီဆိုတာ သတိပေးလိုက်ပြီလေ။…….
`ဒီမှာ…အမိ မင်းငိုချင်ရင် လမ်းပေါ်မှာတော့မငိုလိုက်ပါနဲ့ ….ဖိနပ်ဆိုင်ထဲရောက်မှ
ပြောပြီး ကျွန်တော်ရှေ့ ကဖိနပ်ဆိုင်ထဲသို့အရင်ဝင်ခဲ့လိုက်ပါသည်။ ပြန်လှည့် ကြည့် မိတော့ နောက်ကနေပါလာမယ်လို့ ထင်ခဲ့ တာ လမ်းမ ပေါ်မှာပဲ ရပ်မြဲတိုင်းရပ်နေသည်။ ဒီတော့ ကျွန်တော် အပြင်ကို ပြန်ထွက်ရပြီပေါ့။
`ဟိတ်….မင်းက ဘာလို့ ဝင်လိုက်မလာတာလဲ……
မင်း သက်သက်အရွဲ့ တိုက်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးနော်…..´
`ကျမ… မှ ….. ၀င်မလိုက်ရဲတာ ……ရှင်ကျမအတွက် ၀ယ်ပြီးလာပို့ ပေး…..
ကျမ ဒီကပဲစောင့် နေမယ် လာပို့ ပေး……´
` ဟာကွာ မင်းကတော့ တော်တော်လွန်နေပြီနော်…..မိန်ကလေး..´
`ဘာလဲ ရှင်က မ၀ယ်ပေးချင်လို့ လား ……………..´
`မင်းကိုအဲ့ ဒီလိုပြောမိလို့ လားကွာ……´
စိတ်ထဲမှာ မကျေမနပ်ဖြစ်ပြီး ဖိနပ်ဆိုင်ထဲကို ဒုတိယ တစ်ကြိမ်ပြန်ဝင်ခဲ့ ရတာ ပေါ့…….။ ဖိနပ်လှလှလေးတွေ အများကြီးရှိနေတဲ့ဆိုင်ထဲမှာ ကျွန်တော်ရွေးရခက်နေပြီ။ ပြီးတော့ သူစီးတဲ့ဖိနပ်ရဲ့ ဆိုက်ကိုကျွန်တော် မသိဘူးလေ ။ ဖြစ်ချင်ရာဖြစ်စေတော့လို့ဖိနပ်လေးတစ်ရံကို သူ့ အတွက်ရွေးချယ်လိုက်လေသည်။
` ကဲ အမိ မင်းစီးကြည့် လိုက်ပါ …….မင်းနဲ့တော်ရဲ့ လားလို့မတော်၇င် အခုချက်ချင်းပြန်လဲရမှာလေ……´
ကျွန်တော်ပြောပြီးသွားတော့ကောာင်မလေးက ဖိနပ်လေးကို စီးကြည့် လေသည်။ တိုက်ဆိုင်တာလား….ကံကြမ္မာက တမင်ဖန်တီးလိုက်တာလားတော့ ကျွန်တော်မသိဘူးလေ …………….. ကျွန်တော်ဝယ်သွားတဲ့ ဖိနပ်လေးက သူ့ ရဲ့ ချေဖ၀ါးအောက်မှာလှပစွာ ရှိနေခဲ့ ပြီလေ။
`ရှင် ကျမစီးတဲ့ ဖိနပ်ရဲ့ ဆိုက်နံပါတ်ကို ဘယ်လိုသိတာလဲ…………´
` ဒီလိုပါပဲ မှန်းစပြီးဝယ်လိုက်တာပါ…….မင်းနဲ့ တော်တယ်ဆိုရင်…ကို့ ကိုခွင့် ပြုအုံးနော်………………
ကျွန်တော်ပြောပြီး အလုပ်ကိစ္စရှိတဲ့ နေရာကိုမသွားတော့ဘဲ အိမ်သို့ သာ ပြန်လာခဲ့ လိုက်လေသည်။ စိတ်ထဲမှာတော့ သူမရဲ့ ပုံရိပ်တွေက အရိပ်လိုကပ်ပါလာသည်လေ………………..။………………………….
နောက် တစ်နေ့ ရောက်တော့ သူ ငယ်ချင်းမှာရှိရာ ကော်ဖီဆိုင်သို့ ထွက်လာခဲ့ သည်။ သူငယ်ချင်းများက သူကို စောင့်နေလေသည် လူစုံတပ်စုံပေါ့။ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မတွေ့ ရတာ အရမ်းလဲကြာနေပြီလေ။ ဆိုင်ထဲရောက်တော့ လက်ထောင်ပြလေသည် သူတို့ ဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုပေါ့ .. သူငယ်ချင်းတွေရှိရာသို့ ရှောက်လာခဲ့ လိုက်သည်။ သူရောက်သွားတော့……..မင်းခန့် က
`လာ သူငယ်ချင်း..တစ်ခါတည်းဝင်ကွာ …..´
ဒီတစ်ခါပြောတဲ့ သူက ၀ိုင်းထဲမှာထိုင်နေတဲ့နောက်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဝင်းထွန်းဆိုတဲ့ သူငယ်ချင်းပါပဲ။ နောက်ပြောင်လွန်းတက်တဲ့ အကျင့် လေးက သူ တို့ သူငယ်ချင်း(၃)ရဲ့ ခင်မင်စရာ ကောင်းတဲ့ အရာပေါ့။ သူရောက်သွာတော့ မင်းခန့် က စားပွဲထိုးကောင်လေးအားခေါ်လေသည်။
သူမေးလိုက်တော့ စားပွဲထိုးကောင်လေးက စားစရာတွေတစ်ခုချင်းကို စတင်ပြီးရွတ်ပြလေသည်။
` အေးကွာ…..အစ်ကိုကို့အအေးတစ်လုံးလောက်ပေးကွာ………….´
စားပွဲထိုးကောင်လေး အူလယ်လယ်နဲ့ ပြန်ထွက်သွာတော့မှ ၀င်းထွန်းက ပြောလေသည်။
`ဟာ….ဟေ့ကောင် မင်းကတော့ မတွေ့ လိုက်နဲ့တွေ့ လိုက်တာနဲ့ မွှေတော့တာပဲ….
စားစရာတွေမေးပြီး အအေးမှာရတယ်လို့ ကွာ…မင်းလုပ်လုိုက်တာနဲ့စားပွဲထိုးကောင်လေးတောင်
`မတက်နိုင်ဘူးကွာ…..သူပြောပြတဲ့ ဟာတွေ ငါမှမစားချင်တာ …………
ဒါနဲ့မင်းတို့ နှစ်ယောက်ကို ငါပြောစရာရှိတယ်………..´
`မင်းဘာပြောမလဲဆိုတာ…………၀င်းထွန်း ဆိုတဲ့ ငါက သိပြီးသားပါကွာ..´
`ငါထောက်ခံတယ် သူငယ်ချင်း ……´
ဆိုပြီး မင်းခန့် ပါဝင်ပြောလေသည်။ ဒီတော့ မနေ့ ကဖြစ်ခဲ့ သမျှ အားလုံးကိုသူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အားပြောပြရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်လေသည်။။။။
ရှေ့ သို့ဆက်ပါအုံးမည်။………………….။…………………..
ကိုနိုင်လင်း ကို ရွာထဲက ဖိနပ်စက်ရုံပိုင်ရှင်သူဌေးမအပျိုကြီးတွေ က စိတ်ဝင်စားသွားပြီတဲ့ ။ လုပ်ငန်းတိုးတက်ဖို့ အကြံဥာဏ်တောင်းမယ် ပြောတာပါ ။ အားပေးသွားပါတယ် ။
ကျုပ်တို့ ရွာစားတွေကို အရင်ပြောမှာရား..
အူးလေး အမိက တော်တော် စွာမဲ့ပုံပဲဗျ